Cannavaro oo shaaca ka qaaday sababta uu u doorbiday daawadashada Iniesta, halkii uu ka daawan lahaa Messi – Gool FM
(Spain) 12 Maajo. Daafacii hore kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Talyaaniga ee Fabio Cannavaro ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuu doorbidayo daawadashada Andres Iniesta, halkii uu ka daawan lahaa Lionel Messi.
Andres Iniesta ayaa ka dhaqaaqay Barcelona xagaagii 2018, si uu ugu biiro kooxda reer Japan ee Vissel Kobe, kaddib waayo qurux badan uu ku soo qaatay naadiga Blaugrana.
Andres Iniesta ayaa u dabaaldegay dhalashadiisii 36-aad shalay oo Isniin ah, wuxuuna Fabio Cannavaro munaasabadan darteed ku xaqiijiyay in laacibka reer Spain uu ka mid yahay xiddigaha ugu fiican qadka dhexe taariikhda kubadda cagta.
Halyeyga Fabio Cannavaro ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca kaga qaaday:
“Andres Iniesta wuxuu u ciyaaray qaab cajiib ah oo la yaab leh, ma awoodid waxa aan ka aheyn inaad jeclaato marka aad aragto isaga oo ciyaaraya,”
“Waxa uu ahaa ciyaaryahan xirfadle ah ee dagan, waana jeclaaday isaga.”
“Malaha qof walba wuxuu daawanayay Lionel Messi, laakiin aniga waxaan daawanayey Andres Iniesta.” ayuu hadalkiisa ku soo xiray halyeyga Fabio Cannavaro.